Guudmarka Golaha PCB - Pandawill Technology Co., Ltd.
Guudmarka Golaha PCB
Iyada oo loo marayo labada dalool (THT) iyo dusha sare Mount (SMT) awoodaha wadajirka, labadaba hogaaminaya iyo RoHS u hogaansanaanta la heli karo, adeegeena PCBA wuxuu u dhexeeyaa nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee iskuulada PCB ee teknolojiyada yar yar iyo kuwa dhexe.
Waxaan bixinaa adeegyo furaha-furaha oo buuxa ah. Full-furaha wuxuu daboolayaa been abuurka PCB iyo isku imaatinka, oo ay ku jiraan soo saarida PCBs, qaybo ka mid ah ururintii shirkii ugu dambeeyay ee anf. Loogu Talo Galay Qayb-furaha, macmiilku wuxuu bixin karaa liistada liistada qaybo ka mid ah. Waxaan dalban doonnaa qaybaha harsan waxaanan ku fulin doonnaa kulanka si waafaqsan macaamilka shuruudaha.
Guud ahaan, waxaan bixinaa adeegga Golaha PCB:
✓SMT (Teknolojiyada Dusha-Mount), THT (Teknolojiyada DIP) iyo SMT & THT isku dhafan.
✓Soosaarka RoHS iyo Non RoHS
✓Noocooda, soosaarka mugga hoose ama dhexe (1-5000 PCS).
✓Xalka Xalka silsiladda Bixinta Turnkey / Shixnadda.
✓Qaybta ugu yar 0201, BGA, uBGA, QFN, POP iyo Chipsless Lead.
✓Xalka tijaabada: raajada, AOI, ICT, kormeerka aragga iyo tijaabada shaqada.
Saldhigeena macaamiisha waxaa ka mid ah hogaamiyaasha warshadaha ee RF, Caafimaadka, Warshadaha, Smart Home, Internetka Waxyaabaha iyo elektarooniga baabuurta. Waxaan u heellannahay inaan bixinno Tayo sare, Gaarsiin iyo Adeeg Macaamiil qiimo tartan ah.